1000 मिलीलीटर एरोमाथेरापी विसारक कूल धुलो एयर ह्यूमिडिफायर China Manufacturer
विवरण:शीत धुन्ध एयर ह्यूमिडिफायर,अरोमाथेरापी कूल मिस्ट ह्युमिडिफायर,अरोमाथेरापी विसारक ह्यूमिडिफायर
Home > उत्पादनहरू > अल्ट्रासोनिक ह्युमिडिफायर > 1000 मिलीलीटर एरोमाथेरापी विसारक कूल धुलो एयर ह्यूमिडिफायर
बहुआयामी AROMATHERAPY उपकरण: यो अल्ट्रासोनिक ह्युमिडिफायर एक आश्चर्यजनक अरोमाथेरापी उपकरण हो जुन तपाईं कहिल्यै प्रयोग गर्नुभएको कुनै अन्य भन्दा फरक छ। यसले १००० एमएल पानी ट्यांकी, different बिभिन्न एलईडी लाइट र colorsहरू, मल्टिपल मिस्ट मोडहरू, साथ साथै सुरक्षा अटो स्विच पनि देखाउँदछ जुन पानी बाहिर खसेमा ओभर तापी गर्न रोक्छ।
प्रीमियम क्वालिटी सामग्रीसँग ह्युमिडिफर बनाइएको: अरोमाथेरापीमा यसको प्रयोग बाहेक, यो अत्यावश्यक तेल डिफ्यूजरले वायु आर्द्रताकारको रूपमा पनि काम गर्दछ। तपाईंको घरको हावा र वातावरणको गुणस्तर सुधार्न, घरपालुवा जनावर वा धुम्रपानको गन्धलाई कवर गर्नको लागि यसको प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईंलाई परिवारलाई अत्यधिक सुख्खा हावा, सूक्ष्मजीव, एलर्जी, धुलो, र अधिकबाट बचाउनुहोस्!
विशाल क्षमता ओभरनिट र लामो चलाउन सक्दछ: मानक आकारको ह्युमिडिफायरहरू जस्तो नभई, योसँग अतिरिक्त ठूलो क्षमता छ र करीव २० घण्टासम्म चल्न सक्छ।
T टिमर विकल्पहरू, विविध मिल्दो आउटपुट, स्वतः शट अफ - १ घण्टा, hours घण्टा, hours घण्टा वा लगातार टाइमर विकल्पहरूबाट छनौट गर्नुहोस्। तपाईको उच्च वा कमको छनौटमा अल्ट्रासोनिक डिफ्यूजर आउटपुट टेलर गर्नुहोस्। युनिट सुरक्षा पानी बन्द गरीरहेको छ जब कम पानी स्तर पत्ता लाग्छ।
सबैका लागि एक महान उपहार आईडिया: यदि तपाईं राम्रो र व्यावहारिक उपहारको लागि बजारमा हुनुहुन्छ भने, तपाईं खोज्न रोक्न सक्नुहुन्छ। यो महान प्लास्टिक विसारक एक विचारशील र सजिलो वर्तमान छ, जुन एकबाट सबैले फाइदा लिन सक्दछन्। स्टाइल, आकार, डिजाइन र त्यस प्रकार्यको संयोजनको साथ, यो एक ग्यारेन्टी विचारशील उपहार हो!
अरोमाथेरापी कूल मिस्ट ह्युमिडिफायर तस्वीरहरू:
अरोमाथेरापी एयर ह्यूमिडिफायर अपरेशन:
शीत धुन्ध एयर ह्यूमिडिफायर अरोमाथेरापी कूल मिस्ट ह्युमिडिफायर अरोमाथेरापी विसारक ह्यूमिडिफायर